नयाँ वर्ष २०७९ साल कस्तो छ ? कुन नेताको कस्तो छ भविष्य ? |
Home राजनीति नयाँ वर्ष २०७९ साल कस्तो छ ? कुन नेताको कस्तो छ भविष्य...
नयाँ वर्ष २०७९ साल कस्तो छ ? कुन नेताको कस्तो छ भविष्य ?
काठमाडौं, १ बैशाख । ज्योतिष अंगिरश न्यौपानेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुण्डली धेरै नै राम्रो रहेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री देउवाको भाग्य धेरै नै प्रवल रहेको खुलासा गरे ।
हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसलाई असफलताको बावजुद पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने योग रहेको सुनाए ।
उनले देउवाको अहिलेपनि प्रवल योग रहेको सुनाए । उनले अब हुने निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले सफलता प्राप्त हुने सुनाए । र, कुनैपनि निर्वाचन नरोकिने उनको दाबी छ ।